सेल्टल्ट प्रस्तुतीकरण GitHub: धेरै विशेषताहरु संग एक प्रमुख वेब स्क्रैपर
GitHub सबै भन्दा प्रसिद्ध डेटा निकासी सेवाहरु मध्ये. यो उपकरणले पढ्न योग्य र स्केलेबल ढाँचामा ठूलो पृष्ठहरूको वेब पेज स्क्रैप गर्न सक्छ. यो सर्वोत्तम यसको मेशिन सिकाउने प्रविधिको लागि चिनिन्छ र सानो र मध्यम आकारको व्यवसायका लागि उपयुक्त छ. GitHub को सबै भन्दा विशिष्ट विशेषताहरु तल छलफल गरिएको छ:
GitHub को साथ, तपाईले धेरै चाहानुहुन्छ वेब पृष्ठहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ र डेटालाई स्केलेबल ढाँचामा बदल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै CSV र JSON. तपाईँले स्क्रैप गरिएको बेला डेटा गुणस्तर पनि निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ; GitHub बेकार लिंकहरू बाइपास गर्दछ र तपाईंलाई राम्रो तरिकाले संरचित डाटा प्राप्त गर्दछ.
कम से कम त्रुटिहरु
अन्य पारंपरिक डेटा स्क्रैपिंग सेवाहरु को विपरीत, GitHub तपाईंको डेटा स्क्रैप गर्दछ र स्वचालित रूप देखि सबै साना र प्रमुख त्रुटिहरु लाई ठीक गर्दछ।. यसले हामीलाई सही र त्रुटि-मुक्त जानकारी प्रदान गर्दछ र यसको आफ्नै डेटाको गुणलाई अनुगमन गर्दछ. तपाईं यस उपकरणको साथ PDF फाइलहरू र एचटीएमएल कागजातहरू पनि स्क्रैप गर्न सक्नुहुनेछ.
GitHub यसको प्रयोगकर्ताको अनुकूल इन्टरफेस र सधैँ विश्वसनीय सेवाको लागि सबै भन्दा राम्रो छ।. यसले कुनै पनि मर्मतको आवश्यकता पर्दैन र महिना पछि महिनाहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ. तपाईं विभिन्न ढाँचाबाट छान्नुहोस् र GitHub स्क्रैप र निर्यात डेटा एक वांछित ढाँचामा गर्न सक्नुहुनेछ. यो स्टार्टअपहरू, विद्यार्थीहरू, शिक्षकहरू, र फ्रीलांसरहरूको लागि उपयुक्त छ.
स्क्रैप्स गतिशील वेबसाइटहरु को बारे मा जानकारी
GitHub संग, तपाईं साधारण र गतिशील वेबसाइटहरु दुवै को बारे मा जानकारी को स्क्रैप गर्न सक्छन्. यो उपकरणले सामाजिक सञ्जाल साइटहरू, यात्रा पोर्टलहरू र कुनै पनि मुद्दा बिना ई-वाणिज्य साइटहरूको डेटा पनि स्क्रैप गर्दछ. यसको अतिरिक्त, यसले अन्तराष्ट्रिय HTML कोडहरू परिवर्तन गर्दछ र स्वचालित रूपमा सबै साना त्रुटिहरू फिक्स गर्दछ.
लिपिहरू र एजेंटहरू व्यवस्थापन गर्न वा सिर्जना गर्न क्षमता
गितहोबको सबैभन्दा धेरै विशेष विशेषताहरू हो कि यो व्यवस्थापन र स्क्रिप्टहरू सिर्जना गर्न र दुवै सिर्जना गर्न सक्छ।. यो उपकरणले सामूहिक समायोजन कार्यहरू सजिलैसँग बोल्छ र दस मिनेटमा वेब पृष्ठहरूमा केहि मिनेटमा स्क्रैप गर्न सक्दछ. GitHub सँग, प्रणालीहरू बीचका एजेन्टहरू र डेटा प्रयोगकर्ता सदस्यताहरूको माइग्रेसन बिना कुनै समस्या बनाइयो.
संरचित र प्रयोगयोग्य डेटामा असंगत डेटा परिवर्तन गर्दछ
आयातको विपरीत. io र Scrapy, GitHub केही सेकेण्डमा संगठित, प्रयोगयोग्य र संरचित डेटालाई अपरिचित डेटा परिवर्तन गर्दछ।. यो उपकरण विशेष गरी प्रोग्रामरहरू र गैर-प्रोग्रामरहरूको लागि उपयुक्त छ. यो न केवल तपाईंको वेब पेजहरू स्क्रैप गर्दछ तर तपाईंको साइट अनुक्रमणिका पनि गर्दछ र तपाइँले इन्टरनेटमा थप सुरूहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ. डेटा XLS, XML, CSV र JSON ढाँचामा निर्यात गर्न सकिन्छ, व्यवसायी र उद्यमहरूको कामलाई हदसम्म पुग्न सकिन्छ।.
GitHub एजेन्टहरू भित्र भित्रै सिर्जना गर्न सक्छ र कुनै प्रोग्रामिङ वा कोडिङ कुञ्जीको आवश्यकता पर्दैन।. मेशिन सिकाउने प्रविधिको आधारमा, यो उपकरण स्वचालित रूपमा परिणाम बुकमार्क गर्दछ र एकै समयमा धेरै URL हरु स्क्रैप गर्दछ. यसबाहेक, यो सेकेण्डको कुरामा सम्पूर्ण साइट स्क्रैप गर्न सक्षम छ र विशेष गरी समाचारहरू जस्तै CNN, बीबीसी, द न्यूयर्क टाइम्स र वाशिंगटन पोस्टका लागि उपयोगी छ।.
सायद यो तपाइँको स्क्रैप स्क्रैपिंग डेटा को मूल्यांकन गर्न को लागि र तपाईंको व्यापार बढन को लागी GitHub को उपयोग गर्नुहोस Source .